အခေါင်မြတ်ပန်း အောင်ပန်းမွှေးလှိုင်ကြူ -38 | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London
NIBBANA – 8 →
အခေါင်မြတ်ပန်း အောင်ပန်းမွှေးလှိုင်ကြူ -38
Posted on July 1, 2011 by chitnge
( ဒေါက်တာချစ်ငယ် ၏ ငယ်မူ ကလောင်ခွဲ လက်ရာများ )
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့အတွက် အကြံပေးချက်များ သို့မဟုတ် ရည်မှန်းချက် ထားရှိပြီး အောင်မြင်ပြီးမြောက်နိုင် စေရန် ကြံစည်ကြိုးစားလေ့လာခြင်း။
သာသနာတော်အတွင်း၌ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏ စွမ်းရည်ကို အသေးစိတ် အသုံးချထုတ်လုပ်၍ နည်းစနစ် များကို ထိန်းချုပ်ကာ ရည်မှန်းချက် ပေါက်မြောက်သည်အထိ ကျင့်ကြံကြိုးစား အာားထုတ်ရန် စီစဉ်ခြင်း ..။
နံပါတ်(၁) ရည်မှန်းချက်တစ်ခုကိုထားရှိပြီး၊ ထိုရည်မှန်းချက်၏ အခြေခံသဘောသဘာဝကို လေ့လာခြင်း။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏ ရည်မှန်းချက်မှာ နိဗ္ဗာန်ဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့သည် နိဗ္ဗာန်သို့ ရည်မှန်းရပေမည်။ ထိုအခါ နိဗ္ဗာန်၏ သဘောသဘာဝ၊ အခြေခံများကို သိနားလည်ထားရန် လိုအပ်လေသည်။ ဥပမာ … နိဗ္ဗာန်သည် ဆင်းရဲဒုက္ခမှ ကင်းလွတ်သည်။ ချမ်းသာသည်။ နိဗ္ဗာနံ ပရမံ သုခံ။ နိဗ္ဗာန်၌ အိုခြင်း၊ နာခြင်း၊ သေခြင်း မရှိ။ မွေးဖွားခြင်းမရှိသဖြင့် သေဆုံးခြင်းမရှိ။ နိဗ္ဗာန်သို့ ဘုရား၊ ရဟန္တာများ စံဝင်ကြသည်။ ရုပ်နာမ် ချုပ်ဆုံးသည်။ (ရုပ်နာမ် ချုပ်ဆုံး၊ ဆိတ်သုဉ်းသည်ဆိုသည်မှာ သဘာဝကျသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ရုပ်နာမ်ရရှိထားသဖြင့် အိုရ၊ နာရ၊ သေရခြင်း ဖြစ်ပေသည်။ လောကဓံတွေ့ရခြင်းဖြစ်သည်။ ဆင်းရဲဒုက္ခဟူသည် ရုပ်နာမ်ရှိနေ၍ ဖြစ်ပေါ်လာရခြင်း ဖြစ်သည်။ မဖြစ်ချင်တာလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ဖြစ်ချင်တာလည်း မဖြစ်ပဲ နေချင်နေမည်။ ရုပ်နာမ်ချုပ်ငြိမ်းခြင်းသည် ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ လွန်စွာချမ်းသာသော နိဗ္ဗာန်၊ ချမ်းသာစစ်တည်ရာ နိဗ္ဗာန်၊ ဆင်းရဲမှုတို့မှ ကင်းလွတ်သော နိဗ္ဗာန်သည် ရုပ်နာမ်ကို လက်မခံ။ ရုပ်နာမ် မဖြစ်ရ။ ရုပ်နာမ် ချုပ်ဆုံးရမည် ဆိုသည်မှာ သဘာဝကျသည်၊ ရှေ့နောက် ညီညွတ်သည်။)
စကားချပ်။ ။ ဤနေရာ၌ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ ၀င်စားဖြစ်အောင် ရေးသားဖော်ပြနေခြင်းဖြစ်သည်။ တရားတော် ကိုတန်ဖိုးဖြတ်နေသည့် အဓိပ္ပါယ်မဟုတ်။
ဤနေရာ၌ ရုပ်နာမ်သည် ပွားများအပ်သော အရာမဟုတ်။ ဒုက္ခဖြစ်သည်။ ဆင်းရဲသည်။ ထို့ကြောင့် ယင်းရုပ်နာမ် ချုပ်ဆုံး၊ ဆိတ်သုဉ်းအောင် ကြံဆောင်ရမည်ဆိုသည်ကို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ သတိချပ်သင့်သည်။ ရုပ်နာမ်သည် မပွားများအပ်သော ဒုက္ခသစ္စာမျှသာ ဖြစ်သည်။ ပိုင်းခြားအပ်သော ဒုက္ခမျှသာ ဖြစ်သည်။ ပရိညာတဗ္ဗကိစ္စ ဖြစ်သည်။ ထိုအချက်ကို သေသေချာချာ သဘောပေါက်ရန်လိုသည်။ ရုပ်နာမ်ကို ပွားများ စေသူသည် ဘယ်သောအခါမှ နိဗ္ဗာန်သို့ မရောက်ပါစေနှင့်ဟု ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် ညှို့ယူနေသူဖြစ်သည်။ အမှန်မှာ နိဗ္ဗာန်သို့ ရောက်စေလိုလျှင် ရုပ်နာမ်ကို ချုပ်ငြိမ်းစေရမည်။ ရုပ်နာမ်ကို ပယ်စွန့်နိုင်ရမည်။ ရုပ်နာမ်တွေ ကျင်လည်ကျက်စားနေသော (၃၁) ဘုံကြီး တစ်ခုလုံးကို ခြေကန် စွန့်ပယ်နိုင်ရမည်။ သို့မှသာ သဘာဝကျသည်။ ရှေ့နောက် ညီညွတ်သည်။ ထို့ကြောင့် ရုပ်နာမ်ကို မပွားနှင့်။ နားလည်ရန် ကြိုးစားပြီး ပိုင်းခြားလိုက်ပါ။
နံပါတ်(၂) တာဝန်များ စွမ်းဆောင်ကျင့်ကြံမှုများနှင့် အဖြေရလဒ်များ၊ ဆက်စပ်မှုများနှင့် ကွဲပြား ခြားနားမှုများ။
(က) a.တာဝန်များ (RESPONSIBILITIES)
နိဗ္ဗာန်သို့ စံမြန်းလိုသူ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့သည် တာဝန်ယူကြရမည် ဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဓ၀ါဒသည် ကြောင်းကျိုး ဥပဒေသကို အခြေခံသည်။ `ယေဓမ္မာ ဟေတုပ္ပ၀ါ´ ဖြစ်ရပ်များတွင် အကြောင်းခံတရားရှိကြသည်။ Off things that proceed fromacause ဒုက္ခဆင်းရဲဖြစ်ရပ်သည် သမုဒယ အကြောင်းခံသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဓ၀ါဒသည် အကြောင်းအကျိုးဝါဒဖြစ်ရာ နိဗ္ဗာန်စံလိုသူ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းသည် နိဗ္ဗာန်စံစေနိုင်လောက်သော တာဝန်များကို ရယူရမည်။ အကြောင်းမဲ့ နိဗ္ဗာန်သို့ မစံမြန်းနိုင်။ အကြောင်းမဲ့ မိမိ၏ ရည်မှန်းချက်သို့ မဆိုက် ရောက်နိုင်။
ဥပမာ … ငါသည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဓ မြတ်စွာဘုရားသည် အကြောင်းအကျိုးတရားဓမ္မကို ဟောတော်မူခဲ့သည်။ ငါသည် ဘုရားကိုယုံကြည်သူဖြစ်သည်။ နိဗ္ဗာန်သို့ ရောက်ချင်သည်။ နိဗ္ဗာန်မရောက်လျှင် အိုမည်၊ နာမည်၊ သေမည်ကို ငါသိသည်။ ရုပ်နာမ်ရှိသမျှ ထိုဒုက္ခများကို ခံရမည်။ နိဗ္ဗာန်၌ ရုပ်နာမ်မရှိ ရုပ်နာမ်ချုပ်ငြိမ်းသည်။ ငါသည် ဒုက္ခမခံလိုတော့။ မအိုချင်တော့။ မနာချင်တော့။ မသေချင်တော့။ ဒီတော့ နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင် လုပ်ရမည်။ နိဗ္ဗာန်ရောက်စေနိုင်သော တာဝန်ကို ယူရမည်။ ကျင့်ကြံရမည်။ မကျင့်ကြံလျှင် နိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်။ စားဝတ်နေရေးသည် ငါ့အတွက် အရေးကြီးသည်။ ထို့အတူ နိဗ္ဗာန်ရောက်ရေးသည်လည်း ငါ့အတွက် ထပ်တူထပ်မျှ အရေးကြီးသည်။ ပို၍တောင်အရေးကြီးသေးသည်။ အဓိကကျသည်။
ထို့ကြောင့် ငါတာဝန်ယူရမည်။ ရုပ်နာမ်သည် ဒုက္ခဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်သည်။ မြတ်ဗုဒ္ဓ ဤအတိုင်း ဟောတော်မူခဲ့သည်။ စေတနာထား၍ မဟာဂရုဏာတော်နှင့် ကောင်းစွာဟောတော်မူခဲ့သည်။ ငါကြိုးစားမည်။ မြတ်ဗုဒ္ဓ အလိုတော်ကျဖြစ်အောင် ငါတာဝန်ယူမည်။ မြတ်ဗုဒ္ဓသည် ရုပ်နာမ်မကောင်းကြောင်း၊ သံသရာလည်ရခြင်း သည် ဆင်းရဲကြောင်း၊ ဒုက္ခအမျိုးမျိုးတွေ့ရကြောင်း၊ အို၊နာ၊သေဘေး ပြေးမလွတ်ကြောင်း၊ နိဗ္ဗာန်ရောက်မှ ချမ်းသာမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ရဟန်းသံဃာများကို နိဗ္ဗာန်ရောက်ရန် ကျင့်ကြံကြဖို့ ဆုံးမတော်မူခဲ့သည်။ သတ္တ၀ါ တွေကို ရင်ဝယ်သားကဲ့သို့ သနားသဖြင့် ကယ်တင်ဟောချွတ်တော်မူခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ငါနာခံကျင့်ကြံမည်။ တာဝန်ယူမည်။ ဟုတ်သည်။ ရုပ်နာမ်သည် ဒုက္ခပေးဖို့ အမြဲအသင့်ဖြစ်နေသည်။ ဒုက္ခတုံးကြီးလည်းဖြစ်သည်။ တဖြည်းဖြည်း အိုနေသည်။ တစ်နေ့ သေရမည်မှာ မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲဖြစ်သည်။ ငါနိဗ္ဗာန်ရောက်မှချမ်းသာမည်။ ယခုပင် နိဗ္ဗာန်ရောက်ရန် တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်တော့မည်ဟု သန္ဓိဋ္ဌာန် ချမှတ်သင့်လေသည်။
(ခ) b. စွမ်းဆောင်ကျင့်ကြံမှုများ (activities)
နိဗ္ဗာန်ရောက်ရန် စွမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။ ကျင့်ကြံနိုင်ရမည်။ ဤလောက၌ အကျင့်မရှိလျှင် ဘာမှမဖြစ်နိုင်။ အရာရာသည် စိတ်ကူးယဉ်ရုံမျှနှင့် ပြည့်စုံ ပြီးမြောက်လာသည်မဟုတ်ပေ။ လက်တွေ့ကျင့်ကြံ၊ ကြိုးစားအားထုတ် မှသာ ဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာနိုင်မည်။ ထို့ကြောင့် နိဗ္ဗာန်ရောက်ရန် လက်တွေ့ ကျင့်ကြံတော့မည်၊ စွမ်းဆောင် တော့မည်ဟု ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်ရပေမည်။
စာရေးသူသည် တစ်ခါက `ဆူးခြုံပုတ်´ တစ်ခုကို ရှင်းလင်းရသော တာဝန်ကို ယူခဲ့ရဖူးလေသည်။ ထိုဆူးခြုံမှာ `အိမ်ခန်းလေး တစ်ခန်းစာမျှလောက်´ ရှိလေသည်။ ထိုစဉ်က မိမိ၌ လက်နက်ကိရိယာ၊ ပေါက်ပြား၊ ဓား စသည်တို့ ကောင်းကောင်း မရှိချေ။ ၀ယ်ယူရန်လည်းမလွယ်ကူ။ သို့သော် ရှိသမျှနှင့်လုပ်ဆောင်မည်ဟု ဆုံးဖြတ်ကာ `သစ်ပင်ညှပ်ကပ်ကြေး´ ဖြင့် အကိုင်းငယ်များကို စတင်ကိုက်ဖြတ်ရလေသည်။ ထိုအခါ ဆူးခြုံမှာ အနည်းငယ် သေးလာ၍ ရှင်းလင်းသေသပ်စပြုလာသည်ကိုပင် တွေ့ရသည်။ ထို့နောက် မိတ်ဆွေတစ်ဦးက ပေါက်ပြားငယ်လေးတစ်ခု လာပေးသည်။ စာရေးသူ ဆူးခြုံကို ပေါက်ပြားငယ်ဖြင့် အားစိုက်၍ပေါက်ကြည့်သည်။ ထို့နောက် အောက်ပါအတိုင်း စဉ်းစားမိပါတော့သည်။ လောက၌ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ကြည့်မှ ရည်မှန်းချက်နှင့် နီးစပ်မည်။ လက်တွေ့လုပ်ကြည့်မှ မသိတာတွေ သိလာရမည်။ မတတ်တာတွေ တတ်လာသည်။ လက်တွေ့ လုပ်ခြင်းသည် ရည်မှန်းချက် ပြီးမြောက်ခြင်း၏ အဓိက မဏ္ဍိုင်ဖြစ်သည်။ လက်တွေ့လုပ်သောအခါ အလုပ်က သင်ပေးသည်။ `မုဆိုးစိုင်သင်´ ဆိုသော စကားပုံကဲ့သို့ အလုပ်လုပ်ခြင်းဖြင့် နားလည်မှုတွေ တိုးလာသည်။ အလုပ်လုပ်ရသည်မှာ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည်။ ဂုဏ်ရှိသည်။ အလုပ်လုပ်တိုင်း ရည်မှန်းချက်နှင့် နီးစပ် လာကြောင်း တွေ့မြင်သိရှိရသည်။ အလုပ်သည် လွန်စွာမှ အားကိုးဖွယ်ကောင်းသော စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်း တစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ လူတိုင်းသည် အလုပ်လုပ်ခြင်းဖြင့် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ချစ်သင့်သည်။ အဆင့်မြှင့်သင့်သည်။ ကိုယ့်ရည်မှန်းချက်ကို ရောက်စေသင့်သည်။
မှတ်ချက်။ ။ နာရီပေါင်း (၁၄)နာရီ အလုပ်လုပ်ပြီးသောအခါ မူလက အိမ်တစ်ခန်းစာ ခြုံပုတ်သည် လူတစ်ထိုင်စာလောက်သာ ကျန်ပါတော့သည်။ လက်နက်ကြီးငယ် မပြည့်စုံပဲ တစ်ဦးတည်း လုပ်ဆောင်ခဲ့ရသော အမှန်ဖြစ်ရပ် တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ (စကားချပ် )
(ဂ) c. အဖြေရလာဒ်များ (results)
တာဝန်ပိုင်းများကိုယူ၍ လက်တွေ့ လုပ်ဆောင်ကြည့်ပြီးသောအခါ အကျိုးသက်ရောက်မှုရလာဒ်များကို လေ့လာစီစစ် သုံးသပ်ရပါလိမ့်မည်။ ဥပမာ … နိဗ္ဗာန်သည် ကိလေသာကုန်ခန်းချုပ်ငြိမ်းသည်။ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ ချုပ်ငြိမ်းသည်။ ရုပ်နာမ် ချုပ်ဆုံးသည်။ ငါသည် နိဗ္ဗာန်ရောက်ရန် ကျင့်ကြံနေသည်။ ငါ၏ကိလေသာသည် အဘယ်သို့ ရှိသနည်း။ ငါ၌ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ မည်မျှလျော့နည်းနေပြီနည်း။ ငါသည် ဒေါသဖြစ်လွယ် ပါသလား။ (သို့မဟုတ်) လူသားတွေကိုနားလည်ဖို့ ကြိုးစားပါသလား။ ငါသည် ဘယ်လောက်ခွင့်လွှတ် နိုင်ပါသနည်း။ ငါသည် သူတပါး၏ စော်ကားမှုကို လျစ်လျှူရှုနိုင်စွမ်းရှိပါ၏လော။ ငါသည်မထိုက်တာကို လိုချင်တတ်သလား။ ငါ မရသင့်တာကို ရချင်ပါသလား။ ငါသည် ရအောင်အကြောင်းမပြုလုပ်ပဲ သက်သက် အလကား ရချင်စိတ် လောဘကိန်းအောင်းနေပါသလား။ ငါသည် သူတစ်ပါး သိပ်ကြည့်နေပါသလား။ ငါသည်အဘယ်ကြောင့် ငါလုပ်ဆောင်စရာ ရှိသည်တို့ကိုမလုပ်ဆောင်ပဲ တစ်ပါးသူတွေကို စိတ်ဝင်စား နေရပါသလဲ။ ငါသည် အပိုလုပ်ငန်းတွေ ဘာကြောင့် လုပ်ဆောင်နေရပါသလဲ။ ငါသည် သူတစ်ပါးကို ချောက်တွန်းချင်သော ဆန္ဒများ တိတ်တခိုးပေါ်နေပါသလား။
ဘာကြောင့် ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုး ပေါ်ပေါက်ရသလဲ။ ဒါ ငါ့အလုပ်ဟုတ်ရဲ့လား။ ငါ့အလုပ်ဟာ ငါတိုးတက်ဖို့ ငါ့ဖာသာကြိုးစားရမှာ မဟုတ်ပါလား။ ဘာအတွက် တစ်ပါးသူကို ငြူစူငြိုငြင် ပြစ်တင်ကဲ့ရဲ့ချင်နေရတာလဲ။ ငါ ဒီလိုသာဆို နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးမယ်။ ငါ့ကျင့်စဉ်ဟာ လောဘနည်းရမယ်။ မရထိုက်တာ မလိုချင်ရဘူး။ ရချင်လျှင် ရထိုက်အောင်လုပ်ရုံပဲ။ အမှန်တကယ်ရချင်လျှင် အမှန်တကယ်ကြိုးစားရုံပဲ။ တစ်ပါးသူနဲ့ ငါနဲ့ ဘာဆိုင်လဲ။ သူတော်တာ သူ့ဖာသာသူ၊ ကိုယ်တော်ချင်လျှင် တော်အောင်ကြိုးစားရုံပဲ။ ဒါ ဗုဒ္ဓ၀ါဒပဲ။ အကြောင်းအကျိုးဝါဒပဲ။ ငါ မသိမှု (အ၀ိဇ္ဇာ) များနေသလား။ တဏှာ ကိလေသာ အားကြီးနေသလား။ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟရော ဘယ်လို လဲ။ စသည်ဖြင့် ရလဒ်နှင့် အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို စီစစ်၊ စစ်တမ်းထုတ်ရပါလိမ့်မည်။
နံပါတ်(၃) ရည်မှန်းချက်နှင့် ကျင့်စဉ်ဆက်စပ်ပုံကို ရှင်းပြနိုင်ရမည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ဦး၏ ကျင့်စဉ်သည် မိမိ၏ ရည်မှန်းချက်သို့ ဆိုက်ရောက်နိုင်ကြောင်း ရှင်းပြ၊ ရေးပြ၊ ပြောပြနိုင်ရမည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်း၏ ရည်မှန်းချက်သည် နိဗ္ဗာန်ဖြစ်သည်။ မိမိကျင့်စဉ်သည် နိဗ္ဗာန်သို့ ဆိုက်ရောက်နိုင်ကြောင်း ရှင်းပြနိုင်ရမည်။ ဥပမာ … နိဗ္ဗာန်သည် ငြိမ်သက်သည်။ သိမ်မွေ့ နူးညံ့သည်။ မိမိသည် နိဗ္ဗာန်ရောက်ရန် တည်ငြိမ်သော သမာဓိကို တည်ဆောက်သည်။ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရှိသည်။ မိမိသည် နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်း ကျင့်စဉ်ကို ကျင့်ကြံအားထုတ်သဖြင့် မူလကထက် ပိုမိုသိမ်မွေ့လာသည်။ နှိုင်းနှိုင်းချိန်ချိန် သုခမိန်သို့ ပညိနြေ္ဒသိမ်မွေ့စေ ဆိုသော စကားနှင့် ကိုက်ညီလာသည်။ မိမိသည် လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ၏ ကျေးကျွန် အကြမ်းစား အကြီးစားတော့ မဟုတ်တော့ချေ။ ဥဒဟရုဏ်အားဖြင့် မိမိလက်တွေ့ကျင်စဉ်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
နိဗ္ဗာန်၌ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ ချုပ်ငြိမ်းသည်။ ထို့ကြောင့် ငါ့၌ ဒေါသပေါ်လာလျှင် ငါလက်ခံ၍ မဖြစ်။ လက်ခံလျှင် ဒေါသကို အားပေးရာရောက်သည်။ ငါ ဒေါသမဖြစ်အောင် နေမည်။ ဖြစ်လာလျှင်လည်း ဒေါသကို ထိန်းချုပ်မည်။ ၀ိပဿနာရှုမည်။ ဖြစ်ပျက်ရှုမည်။ အနိစ္စလက္ခဏာတင်မည်။ ဒေါသဆိုသည်မှာ အကြောင်းအကျိုး တိုက်ဆိုင်သဖြင့် ပေါ်ပေါက်လာရခြင်းဖြစ်သည်။ စိတ်၏ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုသာ ဖြစ်သည်။ ဒီလိုဆို ဒေါသစိတ်လည်း ပျက်စီးရသော သဘာဝရှိသည်။ ငါယုံရမည်။ ဘုရားဟောတရားကို ငါ လိုက်နာကျင့်ကြံရမည်။ ဒါမှ နိဗ္ဗာန်ရောက် မည်။ ဒီဒေါသစိတ်ရဲ့ကျေးကျွန် ငါမလုပ်။ ငါပညာရှိလုပ်မည်။ ဒေါသစိတ်သည် ဒုက္ခသမားဖြစ်သည်။ သူ ပျက်ကို ပျက်ရမည်။ မပျက်ပဲ မနေနိုင်အောင် ပျက်ရမည်။ သူကို မပျက်နဲ့လို့ တားလို့တောင် မရပါဘူး။ အရင်က ကိုယ်လည်း ဒေါသဖြစ်ခဲ့ဖူးတာပဲ။ ဒါပေမယ့် ပျက်ခဲ့ပြီ။ အခုလည်း ဒေါသဖြစ်လာပြန်ပြီ။ ပျက်ဦးမှာပါ။ ငါတရားကျင့်နေတယ်။ နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်လို့။ ဒီဒေါသကို ငါလက်ခံလျှင် ဘယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်မလဲ။ ဟုတ်တယ်။ လက်မခံဘူး။ အပျက်ပဲ၊ သိတယ်။ နားလည်ပြီ။ ဒေါသလည်းလျှော့သွားပြီ။ မလျှော့လို့ ဘယ်ဖြစ်မလဲ။ ငါမှ အားမပေးတာ၊ ဒါ ဗုဒ္ဓ၀ါဒပဲ။ အကြောင်းအကျိုးဝါဒပဲ။ ဒေါသစိတ်လိုပဲ ဘာစိတ်ပေါ်ပေါ် ဒါအပျက်၊ ပျက်ရမယ်လို့ ပယ်လိုက်လျှင် ပြီးတာပဲ။ ငါ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟလျှော့အောင်လုပ်တယ်။ ဒါ နိဗ္ဗာန်နဲ့ နီးစပ်တဲ့ လက်တွေ့ ကျင့်စဉ်ပဲ။ လောဘစိတ်၊ ဒေါသစိတ်၊ မောဟစိတ်ကို ပယ်လေလေ၊ နိဗ္ဗာန်နဲ့ နီးစပ်လေလေ၊ ရည်မှန်းချက် ပေါက်ရောက်နိုင်လေလေ၊ ဒါ သဘာဝကျတဲ့ ကျင့်စဉ်နဲ့ ခံယူချက်ပဲ။ ဒါရည်မှန်းချက်အတွက် စီမံကိန်းနဲ့ ကြံဆောင်အားထုတ်နေတဲ့ သစ္စာရှာဖွေသူ ယောဂီရဲ့ ကျင့်စဉ်နဲ့ လမ်းစဉ်ပဲ၊ စသည်ဖြင့် ဆင်ခြင် ၀င်စား စစ်တမ်း ထုတ်ရပေလိမ့်မည်။
ဤကား ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏ စွမ်းအင်ကို အသေးစိတ် ထုတ်လုပ် အသုံးချ၍ ရည်မှန်းချက် ပေါက်မြောက်သည် အထိ နည်းစနစ်ကို ထိန်းချုပ်ကာ ကြိုးစားကျင့်ကြံခြင်းဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်ပေတည်း။
ရွေစာမျက်နှာများ (သို့) အခေါင်မြတ်ပန်း အောင်ပန်းမွှေးလှိုင်ကြူ ဆောင်းပါးများ ဤတွင် ပြီးပါပြီ။
Tags: Buddhism, Myanmar Posts, နိဗ္ဗာန်, ဗုဒ္ဓဘာသာ, ရဟန္တာ, အ၀ိဇ္ဇာ, အနိစ္စ, မြတ်စွာဘုရား
This entry was posted in Buddhism and tagged Buddhism, Myanmar Posts, နိဗ္ဗာန်, ဗုဒ္ဓဘာသာ, ရဟန္တာ, အ၀ိဇ္ဇာ, အနိစ္စ, မြတ်စွာဘုရား. Bookmark the permalink.